Mandeha mankany Jamaika? Ireo dia fampiharana tsy maintsy ananana
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Mandeha mankany Jamaika? Ireo dia fampiharana tsy maintsy ananana
I Jamaika no nosy fahatelo lehibe indrindra ao Karaiba mandrafitra ny lemaka amoron-tsiraka, lemaka vatosokay, Blue Mountains, ary vondrona havoana volkanika, any atsinanana. Na dia firenena kely aza i Jamaika, dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny mozika manerantany. Ny mozika Reggae sy dancehall dia teraka tany Jamaika niaraka tamin'i Bob Marley izay mpilalao malaza indrindra eto amin'ny Firenena. I Jamaika no mpihazakazaka haingana indrindra eto an-tany ary manana vehivavy tsara tarehy.
Betsaka ny toerana azo tsidihana ao Jamaika; Abba Jahnehoy Place (Negril), Dolphin Cove Negril (Lucea), Jamaica Pond, 41 Fleet Street, fitempon'ny fon'ny Jamaika - Discover Falmouth, Abba Jahnehoy Place, Accompong Village, Ahhh… Galerie Ras Natango and Garden, Church Anglican ary koa ny Banana Beach.
Izany dia mahatonga azy io ho firenena tsy maintsy tsidihina any Karaiba noho ny kolontsaina sy ny fahasamihafana misy eo aminy. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fangatahana tokony hanananao rehefa na alohan'ny handehananao any Jamaika.
Fizahan-tany sy fizahan-tany any Jamaika, torolàlana avy any ivelany
Mba hahitanao fikasana mamirapiratra hitsangatsangana any Jamaika liana amin'ny kolontsaina, ny zavakanto, ny tantara, ny nahandro, ny zavamaniry, ny zavamaniry ao aminy, mila manana fitsangatsanganana any Jamaika ianao ary hijery ilay torolàlana Country offline.
Ny rindranasa dia manana ny fiasa sy ny sarin'ny Firenena rehetra izay azo idirana ivelan'ny Internet ary tsy mila fifandraisana Internet ianao raha te hijery.
Ny rindranasa dia misy fiasa amin'ny lalana hitaterana anao any amin'izay alehanao ary hampiseho aminao toerana mahavariana hafa, manana fizarana misaraka ho an'ny manintona lehibe izy ary mampahafantatra anao momba ny Airways, Roadways, Railways, ary Waterways ho an'ny dia tsy misy manahirana.
Afaka mitondra anao amin'ny alalàn'ny Wildlife Wanderings ilay rindranasa, tsy hoe mampianatra anao mahandro sakafo matsiro fotsiny fa manandrana azy ireo koa, manavao ny vaovao mivantana mandritra ny firenena, ary manana phrasebook hianarana andian-teny anglisy fototra.
Ity torolàlana ity koa dia manana endrika iray ahafahanao mifampiresaka amin'ny fiteninao mandritra ny firenena.
Jamaika fiarakaretsaka ara-potoana
Mila ity fampiharana taxi ity ianao mba hanamorana ny fivezivezenao avy amin'ny toerana halehanao mankany Jamaika. Manome fiara madio sy mpamily mahay izy ireo ary nanompo ny vahoaka Jamaikana nandritra ny 18 taona lasa izay nahatonga azy io ho serivisy taxi be mpitia indrindra.
Manolotra serivisy maro isan-karazany izy ireo, ao anatin'izany ny fiantohana 100% Public Passenger Vehicle (PPV) sy ny voucher Program Voucher Incentive Program (VIP) noho izany tsy ilaina ny miandry mandritra ny fotoana maharitra satria izy ireo no manana andiany lehibe indrindra miparitaka eran'ny tanàna.
Ny mpamily matihanina dia mandray sy mampidina mpandeha amin'ny fotoana firaketana avy amin'ny toerana rehetra, amin'ny ora rehetra na antoandro na alina.
Mpandika teny jamaika
Mila ny fampiharana Mpandika teny jamaika ianao satria mamela anao handika avy amin'ny Standard English mankany Jamaikana Patois. Hanampy anao hifandray amin'ireo mponina tsy mahay miteny anglisy tsara kokoa izany. Ny fampiharana anefa dia tsy marina 100 isan-jato.
SeatGuru dia ahafahan'ny mpandeha misafidy seza mety mandritra ny fizahana amin'ny Internet. Azonao fantarina hoe iza ny laharana misy fivoahan'ny herinaratra, efitrano misy fanampiny, na lavitra ny trano fanasana izy. Maimaimpoana ny fampiharana ary azo ampiasaina na ho an'ny Android na ho an'ny iOS. Azonao atao koa ny mampiasa ny fampiharana finday amin'ny solosainao findainy amin'ny alàlan'ny alain-tahaka azy io Bluestacks Emulator.
Ny fangatahana dia mitaky anao hametaka fotsiny ny laharan'ny sidinao ary hahafantatra ny karazana fiaramanidina hiakaranao sy hampiseho ny sarintany misy loko miloko amin'ny seza tsara indrindra hatramin'ny ratsy indrindra amin'ny sidinao mankany Jamaika.
Ny fampiharana dia ahafahan'ny mpitsangatsangana mijery, mamandrika ary miditra amin'ireo efitrano fitobian'ny seranam-piara manerantany ao anatin'ny segondra. Misy mihoatra ny 2000 ny tontolon'ny andrana ao amin'ny katalaogin'ilay fangatahana miaraka amina kojakoja toy ny Wi-Fi sy fandroana, sakafo ary serivisy fisotroana.
Rehefa mikasa ny dianao mankany Jamaika ianao dia ampidino maimaim-poana ilay fampiharana na Android na iOS ary miverina miala sasatra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny efa voatondro tsara amin'ny dia manaraka.
Fanandramana ao Jamaika
Manome anao izay rehetra ilainao amin'ny filanao amin'ny maha-mpirenireny any Jamaika anao ny Jamaica Experiences Mobile App. Tsangatsangana i Jamaika toy ny eo an-toerana miaraka amin'ity torolàlana tokana ity hijerena ny toerana tsara indrindra, hotely, trano fisakafoanana, hetsika ary maro hafa. Sariaka ho an'ny mpampiasa izy io ary afaka miditra amin'ny toro-hevitra momba ny dia manokana ataonao any Jamaika ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Farany, tokony hanana a WhatsApp fampiharana amin'ny findainao satria ho tianao ny hizara ny traikefa nahafinaritra sy ny toerana Jamaikana amin'ireo namana sy havanao